Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo sabab layaab leh uga hor yimid fursad kooxdiisa loo siiyay saxiixa xiddiga reer Wales Gareth Bale. – Gool FM
(England) 22 Luulyo 2019. Kooxda Manchester United ayaa lagu soo warramayaa iney iska diiday fursad loo siiyay saxiixa xiddiga reer Wales Gareth Bale, sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya ingiriiska tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hor yimid.
Gareth Bale ayaa laga reebay liiska ciyaartoyda kooxda Real Madrid ee la ciyaaray Bayern Munich, Zidane ayaana si aan gambasho laheyn uga dhawaajiyay in xiddigaan ay wanaagsaan laheyd hadii uu isaga tagi lahaa kooxda ka dhisan caasimadda.
30-jirkaan waxaa lala xiriirinayay muddo dheer kooxda Red Devils, waxaana xusid mudan inuu 100 gool u dhaliyay kooxdiisa tan iyo markii uu 2013 kasoo hayaamay White Hart Lane.
Sida lagu qoray London Evening Standard, Red Devils ayaa la siiyay fursad ay kula saxiixato xiddigaan, balse waxey ka dhawaajisay ineysan wax xiiso ah u qabin maadaama Ole Gunnar uu doonayo inuu soo yareeyo isku cel-celiska da’da ciyaartoyda kooxdiisa.
Taasi waxey ka dhigan tahay in Ole Gunnar uu doonayo ciyaartoyda da’da yar iney kusoo bataan garoonka Old Trafford si looga faa’ideysto sanado badan.
Red Devils waxaa lala xiriirinayaa ciyaartoyda kala ah: Harry Maguire, Bruno Fernandes iyo Nicolas Pepe kuwaas oo ay saxaafadda warineyso iney kooxda u dhawdahay saxiixyadooda.